Shikhar Post » पर्यटन नीति गाउँमैत्री बनाउन जरुरी छ
पर्यटन नीति गाउँमैत्री बनाउन जरुरी छ
होमस्टेको दर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो भयो, स्थानीय स्तरमै दर्ता गर्ने व्यबस्था हुनुपर्छ र शुल्क १० हजार बनाउनु हुँदैन
अध्यक्ष, गाउँ पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्च (भिटोफ–नेपाल)
कमल सापकोटा सात सय सदस्य रहेको गाउँ पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्च (भिटोफ–नेपाल)का केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ । ग्रामिण पर्यटन विकासविना दीर्घकालिन पर्यटन विकास हुन नसक्नै धारणा राख्ने सापकोटाले विभिन्न माध्यामबाट मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान दिदै आउनुभएको छ । विभिन्न पर्यटकीय संघसंस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकासमेत निर्वाह गर्दै आउनुभएका उनै सापकोटासँग शिखरपोष्टले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
ग्रामिण पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि सरकारसँग भिटोफ नेपालको सम्बन्ध र सहकार्य कस्तो छ ?
सरकारसँग ग्रामिण पर्यटन नीति निर्माणको लागि होस् या कार्यक्रमिक साँझेदारी सहकार्यका लागि हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौं । तर प्रष्ट रुपमा भन्दा सरकारले अहिलेसम्म पनि ग्रामिण पर्यटनबारे बुझेको छैन र भिटोफ नेपालको भूमिकाबारे सरकारलाई पूर्ण हेक्का छैन । भिटोफ नेपाल भनेको होमस्टे सञ्चालन गर्ने संस्था हो भन्ने ढंगबाट सरकारले बुझिरहेको छ । म के स्पष्ट पार्न चाहान्छु भने यो संस्था सदस्य संख्या र अन्य हिसाबले पनि पर्यटन क्षेत्रमध्येको ठूलो हिस्सेदारी संस्था हो । संस्थामा पर्यटनसम्बद्ध सबै खाले व्यवसायहरु जोडिएका छन् र अहिले ७ सय हाराहारीमा हाम्रा सदस्यहरु छन् । नेपालको पर्यटन भनेको मुख्यतय गाउँबाटै सुरु हुन्छ । त्यसैले भिटोफ नेपालको कार्यक्षेत्र पनि हरेक ग्रामिण पर्यटनसँग जोडिन्छ । हरेक गाउँलाई पर्यटनको माध्यमबाट प्रवद्र्धन र विकास गर्न राज्यबाट ठूलो रकम खर्चिएर गरिने कार्यक्रम भन्दाबढि यो संस्थाले भूमिका खेलेको छ । तर वास्ताविक अर्थमा भन्ने हो भने भिटोफ नेपाल भनेको पर्यटन विकासको लागि एउटा महासंघ हो । यत्ति हुँदाहुँदैपनि सरकार र अन्य पर्यटकीय संघसंस्थाले पनि यो संस्थाको भूमिकालाई कम आकेको हो कि भन्ने महशुस हामीले गरिरहेका छौं । अबका दिनमा संस्थागत सहकार्यका लागि सरकार र अझ म जोड दिएर भन्छु नेपाल पर्यटन बोर्डले ध्यान दिनुपर्छ ।
तपाई नेतृत्वमा आइसकेपछि चाही संस्थालाई चलायमान बनाउन के गरिरहेको भएको छ ?
संस्थालाई अगाडि बढाउनको लागि आन्तरिक व्यवस्थापन चुस्त हुनुपर्छ । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी संस्थामा आइसकेपछि आन्तरिक व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम ग¥यौं । पहिले सामान्य कार्यलय थियो तर त्यहाँ बैठक बस्ने ठाउँ, अध्यक्ष बस्ने ठाउँ, अरु स्टाफ बस्ने ठाउँ केही पनि थिएन । अहिले ती सबै कुरालाई व्यवस्थापन गरेका छौं । त्यसपछि हामीले विभिन्न विभागहरु गठन गरेर कार्यसमितिका सबै साथीहरुलाई जिम्मेवारी दिएर काम कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइरहेका छौं । संस्थामा यसअघि अध्यक्ष र महासचिवबाहेक अरुको खासै काम हुन्थेन । त्यसो हुँदा संस्थाप्रतिको अपनत्व केही न केही रुपमा कम हुने रहेछ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेरु प्रत्येक सदस्यले एउटा विभागको जिम्मेवारी सम्हाल्नेगरी ११ वटा विभाग बनाएका हौं ।
त्यस्तै सल्लाहकार कमिटि बनाएर संस्थाको योजना तथा कार्यक्रमको विषयमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गरेका छौं भने संस्थालाई मार्गनिर्देश गर्ने हेतुले पर्यटन क्षेत्रका बरिष्ठ व्यक्तित्व तथा विज्ञहरुलाई समेटेर एक विशेष समिति गठन गरेकौं । जुन समितिले यसअघिका चुनावमा देखिएको राजनीतिक खिचातानीहरुलाई हटाएर सबै पक्षलाई मिलाएर ग्रामिण पर्यटन विकासको खाँका बनाउने काममा मार्गनिर्देश गर्नेछ । त्यसैगरी गत २७ सेप्टेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन दिवशको अवसर पारेर नेपाल सरकार र नेपाल पर्यटन बोर्डसँगको सहकार्यमा हामीले तनहुको दुम्सी दराई, तराईको भादा गाउँ र कर्णालीको एउटा गरी ३ वटा गन्तव्य गाउँ घोषणा गर्‍यौ । त्यसमध्ये दुम्सी दराईमा भिटोफ पोखरा च्याप्टर र केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा गरेर गन्तव्य पहिचानलाई सार्थकता तुल्याउन काम गरेका छौं । तराईको भादामा गत महिनामा एउटा तालिम गर्‍यौ । म एउटा होमस्टेमा पुगेको थिए त्यहाँ मैले देखे कि केही होमस्टेमा चाउँचाउँ पकाएर दिन थाल्नुभयो । यसअघि भिटोफले होमस्टे प्रवद्र्धन गर्यो तर तालिम दिन नसकेको रहेछ भन्ने महसुस गरेर त्यो तालिम गरेका हौं । त्यो वरीपरिका १३ वटा होमस्टेलाई ४ दिने होमस्टे तालिम (खाना कसरी पकाउने, हेमस्टेमा आउने पाहुनालाई कसरी स्वागतसत्कार गर्ने र स्थानीय संस्कृतिलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्नेलगायत) हामीले सिकायौं ।
आगामी योजना चाही के के छन् ?
मेरो कार्यकालमा देशैभरी समेटेर तालिम दिने योजना छ । नयाँ कामको रुपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा संस्थाहरुसँगको सम्बन्ध सम्पर्क बढाउन विभागलाई थप चलायमान बनाउने योजना छ । सम्भावनै सम्भावनाले भरिपूर्ण हरेक गाउँलाई पर्यटनसँग जोड्नका लागि समयसापेक्ष कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्ने योजना छ र अब छिट्टै पूर्व कार्यसमितिसँग बसेर थप छलफल गर्ने काम गर्ने योजना छ । त्योलगायत थुप्रै नीतिगत समस्याहरुको समाधानका लागि संस्थागत पहलकदमी अघि बढाउनुलाई आफ्नो मुख्य दायित्व ठानेर हामी अघि बढिरहेका छौं र बढ्नेछौं ।
सलाङ र नलाङ भ्रमणको कार्यक्रम बनाउनुभएको छ यो कस्तो खालको कार्यक्रम हो ?
यही २४ र २५ तारिखको लागि धादिङको सलाङ गाविसमा पर्ने सलाङ होमस्टे र नलाङ गाविसमा पर्ने धार्मिक पर्यटकीयस्थल सिद्ध लेकको भ्रमण कार्यक्रम बनाएका छौं । शिवरात्रीको दिन पारेर हामीले त्यसको कार्यक्रम गरेका हौं । यसलाई भव्य तुल्याउन धादिङका सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरु र काठमाडौंका पर्यटकीय संघसंस्था, नेपाल पर्यटन बोर्ड, व्यवसायी तथा पत्रकारहरुको सहभागिता गराउनेगरी योजना बनाएका छौं । यसले सलाङ होमस्टेको प्रवद्र्धन गर्नुका साथै नलाङको धार्मिक तथा प्राकृतिक महत्वलाई पर्यटनसँग जोड्ने विश्वास हामीले लिएका छौं ।
सरकारले अबदेखि अनिवार्य होमस्टे दर्ता गर्नुपर्ने र शुल्कको रुपमा १० हजार तिर्नुपर्ने नीति बनाएको छ । यसमा तपाईको धारणा के हो ?
होमस्टे सञ्चालनका लागि अनिवार्य दता गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो पूर्ण समर्थन छ । र दर्ता प्रक्रियामा त भिटोफले सहजीकरणसमेत गरिरहेको छ । तर अहिलेको दर्ता प्रक्रिया ज्यादै झन्जटिलो भयो । त्योसँगै भरखर मात्र होमस्टेको लागि सरकारले ५ हजारबाट बढाएर १० हजार शुल्क बनायो भन्ने सुनिएको छ । यो महंगो भयो । यसलाई अभिलम्ब खारेज गरेर पहिलेकै शुल्क कायम गर्नुपर्छ । राज्यबाट प्राप्त हुनुपर्ने सेवासुविधा तथा प्रोत्साहनमूलक काम चाही नगर्ने खाली शुल्कमात्रै बढाउनु गलत हो । यो कुरा पर्यटन विकासमैत्री हुन सक्दैन । होमस्टे भनेको स्थानीयस्तरमा आफैले सेल्फ इम्ल्योय भएर चलाउने व्यवसाय हो । त्यो व्यवसायलाई गाउँमै दर्ता गर्ने व्यवस्था हुनुप¥यो । दर्ता प्रक्रियाको लागि वडा हुँदै गाविसबाट सिफारिस लिएर क्षेत्रीय कार्यलय अथवा काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्न खोजिदैछ यसप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ । नयाँ संरचनाअनुसार वडापालिका अथवा गाउँपालिकामै दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भन्ने भिटोफको अध्यक्षको हैसियतले मेरा जोडदार माग छ । यो व्यवहारिक छैन अन्तत यो घटाउनैपर्छ । आफ्नै घरमा एक दुईटा कोठा सफा गरेर चलाउने व्यवसाय हो । यसमा ठूलो लगानी पनि हुँदैन र नाफा पनि । त्यसैले यस क्षेत्रको समयसापेक्षित व्यवस्थापनका लागि सरकारले होमस्टे क्षेत्रको अनुगमन प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
यस्तो नीति बन्दा तपाई व्यवसायी अर्थात व्यवसायिक संस्थासँग छलफल हुँदैन ?
बिडम्बना यही छ कि निजी क्षेत्र र सरकार सँगसँगै जाने भन्ने भाषणबाजी हुन्छ । कुनै पनि नीति बनाउँदा निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्नुपर्छ भन्ने बारम्बार आवाज हामीले उठाउँदै आएको हो । तर सरकारले हामीलाई एकप्रकारले आश्वासन दिने तर व्यवहारमा लागु नगर्ने प्रबृत्ति दोहो¥याइरहेको छ । र पछिल्लोपटक होमस्टेसम्बन्धि नीति बनाउने कुरा पनि त्यसैको निरन्तरता हो भन्ने लाग्छ । यस विषयमा सरकारले हाम्रो पनि राय लिनुपथ्र्यो । सरकारले जहिलेपनि यस्तै काम गरिरहेको छ । नीति ग्रामिण पर्यटन मैत्री बनाउन जरुरी छ । जस्तो होमस्टे दर्ता गर्ने तर सरकारबाट पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगर्ने । यो तरिकाले गाउँको पर्यटन विकास हुन सक्दैन ।
भिटोफ नेपालले हरेक वर्ष गन्तव्य गाउँको पहिचान र प्रवद्र्धनको लागि घोषणा गर्नुहुन्छ तर, तपाईहरुबाट घोषित ती गन्तव्यहरुलाई पुनर्ताजकी गर्ने काम भएको देखिदैन नि ?
निश्चित रुपमा नयाँ गन्तव्यलाई प्राथमिकता दिन्छौं । तर त्यसको अर्थ हामी पहिचान र प्रवद्र्धन गरेका गाउँलाई फर्केर नहेर्ने भन्ने होइन । हामीले जति पनि प्रवद्र्धन गरेका गन्तव्यहरुको बारेमा संस्थाको वेवसाइटबाट होमस्टेसम्बन्धि आवश्यक जानकारीहरु राख्ने र मिडियामार्फत प्रचार गर्ने काम गरिरहेका छौं । हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको सम्बन्धित गाउँलाई आत्म निर्भर बनाउने हो । सम्बन्धित गाउँहरुसँग हाम्रो सधै सहकार्य भइरहेको छ । हामीले प्रवद्र्धन गरेका हामी फेरी फर्केर जाने, पर्यटकलाई त्यहाँसम्म पुर्‍याउन सधै तल्लिन छौं ।
त्यसो भए तपाईहरुले पहिचान र प्रवद्र्धन गरेका गन्तव्य गाउँहरुका लागि खास कार्यक्रम चाही के छ त ?
हामीले प्रवद्र्धन गरेका सबै गन्तव्यहरुमा अहिले पर्यटकीय वातावरण बनिसक्यो । अब अहिलेसम्म भिटोफ नेपालले जुनजुन गाउँहरुको पहिचान र प्रवद्र्धन गरेको छ त्यहाँत्यहाँ मुख्यद्धारमा भिटोफ नेपाल र सम्बन्धित होमस्टेको नाममा सूचनामूलक होडिङ बोर्ड राख्ने तयारी गरेका छौं । जसको लागि तारागाउँ विकास समितिसँग सल्लाह भइसकेको छ । आगामी दिनमा थप कार्यक्रम अघि बढाउदै जानेछौं ।